Atumatu Ntuzi Uzo ato nke Web We Keep in Mind. Ndị ọkachamara na Semalt maara otú ha ga-esi zere ịbụ ndị na-egbu ndị omekome Cyber
N'afọ 2015, ụlọ ọrụ Ponemon wepụtara ihe ndị si na nyocha "Ọnụahịa nke Cyber ​​Crime",nke ha duziri. Ọ bụghị ihe ijuanya na ọnụ ahịa nke mpụ cyber na-arịwanye elu. Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ ahụ na-akụda mmụọ.Ihe ndị Cybersecurity Ventures (conglomerate) zuru ụwa ọnụ na ụgwọ a ga-efu $ 6 trillion kwa afọ. Ná nkezi, ọ na-ewe otu nzukọỤbọchị iri atọ na atọ iji gbaghachite azụ mgbe mpụ mpụ cyber na ego nke nkwụghachi ụgwọ dịka $ 639 500 - backlink high pr dofollow.
Ị maara na ịgọnahụ ọrụ (DDOS ọgụ), ebe nrụọrụ weebụ dabere na mgbada na obi ọjọọndị na-emechi ọnụ maka 55% nke mpụ niile nke cyber? Nke a abughi nani ihe data gi na egwu, kamakwa o nwere ike ime ka i ghara inweta ego.
Frank Abagnale, Onye Nlekọta Ndị Nlekọta Ọrụ nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, na-enye anyị ịtụle ọnụọgụ atọ nke ebe ntiwapụ nke emere na 2016.
Nke mbụ: Mossack-Fonseca (akwụkwọ Panama)
Akwụkwọ akụkọ Panama na-abanye na njedebe na 2015, ma n'ihiọtụtụ nde akwụkwọ ndị a ga-egosipụta site na ya, a na-afụ ya na 2016. Ogologo ahụ kpughere otú ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị ọchụnta ego bara ọgaranya,ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu na-emefu ego ha na ego ha. Ọtụtụ mgbe, nke a dị nro ma gafere omume ọmaakara. Ọ bụ ezie na Mossack-Fonseca bụ otu nzukọ na-ahụ maka nzuzo, usoro nchedo ozi ya fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị adị.Maka nmalite, ihe oyiyi WordPress na-emetuta ngwa mgbakwunye ha ji mee ihe n'oge ochie. Nke abuo, ha jiri Drupal dị afọ 3 mara nke ọma.N'ụzọ dị ịtụnanya, ndị na-achị usoro ihe omume adịghị edozi nsogbu ndị a.
> na-ekwusi ike mgbe niile na ịchọta CMS, plugins na themes na-emelite mgbe niile..
> na-emelite emelite na egwu egwu CMS ọhụrụ. Joomla, Drupal, WordPress na ndị ọzọọrụ nwere ọdụ data maka nke a.
> iṅomi ihe niile plugins tupu i mejuputa ma me ka ha rụọ ọrụ
Nke abụọ: Foto foto PayPal
Florian Courtial (onye engineer engineering French) chọtara CSRF (ịjụ ịjụ ajụjụ maka saịtị)nkwụsị na saịtị ọhụrụ nke PayPal, PayPal.me. Akwụ ụgwọ zuru oke ọnụahịa ụwa zuru oke PayPal.me iji kwado ngwa ngwa ịkwụ ụgwọ. Otú ọ dị,A na-eme ihe PayPal.me. Florian enwere ike idezi na ọbụna wepu akara CSRF site n 'emelite foto foto onye ọrụ ahụ. Dị ka ọbụ, onye ọ bụla nwere ike ịghọ onye ọzọ site n'inweta foto ha n'ịntanetị dịka ọmụmaatụ si na Facebook.
> akara ngosi CSRF pụrụ iche maka ndị ọrụ - ndị a kwesịrị ịbụ ihe pụrụ iche na mgbanwe mgbe ọ bụla onye ọrụ ahụ na - abanye.
> ihe akaebe maka arịrịọ ọ bụla - ọzọ karịa isi dị n'elu, a ga-etinyekwa akara ndị amgbe onye ọrụ rịọrọ maka ha. Ọ na-enye nchebe ọzọ.
> n 'oge - na - ebelata nsogbu ahụ ma ọ bụrụ na akaụntụ ahụ anọgideghị na - arụ ọrụ ruo oge ụfọdụ.
Nke atọ: Ndị Russia Foreign Affairs Ministry Faces an XSS Embarrassment
Ọ bụ ezie na ọtụtụ mkpokọta weebụ na-ebute imebi ihe ego ha nwetara, aha,na okporo ụzọ, ụfọdụ na-eme ihere. Ikpe na isi, mbanye anataghị ikike nke na-emeghị na Russia. Nke a bụ ihe merenụ: onye American hacker(aha ya bụ Jester) na-eme ihe site na scripting site na XSS (vulnerability) nke ọ hụrụ na ebe nrụọrụ weebụ na-arụ ọrụ na Russia. Najester kere mkpokọta weebụ nke na-emetụta echiche nke ụlọ ọrụ gọọmentị mana ma e wezụga isiokwu, nke ọ na-ahaziri imena-akwa ha emo.
> dozie ntinye HTML
> adịghị etinye data ma ọ bụrụ na ị nyochaa ya
> chebe Onwe gị site na DOM nke dabeere na ọma XSS